> Resource > Talooyin > Wedding Guest Book, Waxaad samaysataa gaar ah Guest Book ah ee Reception Wedding
Soo dhoweynta kasta oo arooska ayaa buugga martida arooska ah. Ma ogtahay in? Haddii ay maya tahay, dalban mid ama ka dhigi buug martida sawir gooni ah arooska. Waa arrin aad u muhiim ah in aroosadda kasta oo aroos. Years ago, buugga martida arooska noqday mid caawisa oo ah in la xusuusto u soo arooska, in ay xasuusin u mahadsanid kaararka , iyo in la abuuro buugga cinwaan rasmi ah. Laakiin dhab ahaantii, buugga martida arooska laga yaabaa inuu kubadii ah si ay u qoraan ugu xusuusta aad saaxiibo aad on, waxay ku talo guur farxad ka waalidka, iyo guud ahaan rabitaanka .
Si ay u keepsake ah, halkii shay ee boodhka weyn guugta soo jeedin buugga martida arooska, sameeyo sawir buug shakhsi martida halkii buugga martida arooska rasmi ah. Waxaa la soo jeediyay in aan la xaddido waxyaabaha u qora magaca qoraalada ama buugga. Just tago meel banaan ah ee rabitaanka, talo, iyo erayo run ka guests oo dhan. Xataa waxaad u leenahay meel ay sawir kitaabkii martida, oo waxaa ka buuxsami lahaa sawiro laga qaaday midkood marti ama arooska sawir. All oo dhan, waxay noqon kartaa raaxo u leh in aad la abuuro buugga martida sawir , iyo sidoo kale martidaada xiiso leh inay la soo wareegto in la. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah martida arooska fikrado buug iyo wordings aad u:
Wedding fikrado buugga martida
Buugga martida Wedding waxaa kaloo loo yaqaan Calaamad arooska kitaabkii , taas oo kuu ogolaanaysaa guests inay saxeexaan oo iyaga u saamaxaaya in ay qori xusuus, qoraalada hambalyo, saxeexyada iyo sidoo rabo. Haddii aad arooska ayaa theme ah, buugga martida arooska ah ayaa sidoo kale ka mid yahay meel si dheereynayo style . Waa wax fiican in la qorsheeyo buugga martida arooska in aad badasho oo ay ka set dhammaystirayaa qalinka - saldhig iyo qalimaan saliid rinjiga-style ama qalimaan macdan saliid madow ama buluug ah, iyada oo ku xidhan arooska style buugga martida.
Wedding wordings buugga martida
Qor wax gaar ah oo ku saabsan buugga martida arooska inay idiinku beddelin ah keepsake xusuus kaamil ah. Isticmaal icon Add Text (warqad T) dusheeda ku darto wordings aad rabto. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah wordings buugga martida arooska horseedaya aad u waxyoonay.
Buug Our martida oh waa sidaas madhalays,
oo aan erayadii jacayl ah iyo Sunada,
fadlan qaado daqiiqad uu naga tago note ama kaftan,
talo qaar ka mid ah ama si fiican u doonayo ...
(aroosadda) iyo (aroos)
Fadlan nala wadaagto aad xigmad,
oo ku saabsan guurka, jacaylka, iyo nolosha.
Sida loo noqon ninkaaga jacaylka ah,
ama afo kaamil ah.
Waxa aad u jeclaan lahaa in newlyweds ah
in la xasuusto inta badan ku saabsan maantadan la joogo?
Fadlan qor rajo aad iyo rabitaanka,
in ay nala wadaagto nolosha.
Wixii hadiyadda ugu weyn ee dhan,
waa hadiyad ka mid ah talooyinka.
DVD Muqaal dhise waa gaare slideshow wanaagsan. Haddii aad rabto in la abuuro buug martida ka sii cad ah, hana ka baqan in ay tijaabiyaan!